पाल्पामा पर्यटन वर्षको तयारी खै ? – Palpa Samachar
पाल्पामा पर्यटन वर्षको तयारी खै ?
By palpa samachar	 On Dec 11, 2019
“घुम्न आएका अतिथिको सम्मान भ्रमण बर्ष २०२० को साझा आह्वान” भन्ने नारा सहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइदैछ । अब यो वर्ष सुरू हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ । यो एक वर्षको अवधिमा नेपालमा २० लाख बिदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । अभियान अन्र्तगत देश बिदेशमा केही रचनात्मक कामहरु भएका छन् । नेपालमा मात्रै नभएर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि यसलाई एउटा अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएका छन् । हरेक देशमा अहिले भ्रमण बर्ष केन्दीत कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । यो निकै राम्रो बिषय हो । पर्यटनका माध्यमबाट नेपालको प्रचार बिश्वसामु पुर्याउन सकिने, आम्दानीको स्रोत पनि बढ्ने यो नेपालका लागि एउटा महत्वपुर्ण अवसर हो ।
पक्कै पनि यो अवधिमा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । पर्यटन वर्ष पर्यटकमैत्री बनाउने गरि सरकारले योजना पनि बनाएको छ । पर्यटकहरू काठ्माण्डौ आएर उतैबाट फर्केर जादैनन् । उनीहरू नेपालका बिभिन्न स्थानहरुमा पुग्छन् । यसकारण पनि पर्यटन बर्षको तयारी काठ्माण्डौ र पोखरामा मात्रै गरेर पुग्दैन । हरेक स्थानीय तहहरुले अव पर्यटन वर्षको तयारी गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यहरुको पहिचान गर्दै यसको प्रचार प्रसार र ब्यवस्थापनमा लाग्नु आवश्यक छ । हुन त सबै स्थानीय तहहरुले पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट पनि बिनियोजन गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले यस शिर्षकको रकम अन्र्तक्रिया, छलफल गरेर सकिएको छ । अघिल्ला धेरै वर्षहरुमा पनि यस्तै अन्र्तक्रिया कार्यक्रममै धेरै बजेट खर्च भएका छन् । यस वर्ष खास पर्यटन बर्ष केन्द्रीत कार्यक्रमहरू हुनु आवश्यक छ ।
पर्यटन वर्ष नजिकिएपनि पाल्पामा त्यसको खासै प्रभाव देखिदैन । तानसेन नगरपालिका भित्र धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरू छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा केही न केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्य पनि छन् तर पर्यटन बर्ष केन्द्रीत कुनै पनि कार्यक्रम भएका छैनन् । तानसेन त झनै सुन्य जस्तै छ । यहाँ कुनै क्रियाकलाप भएकै छैन । यसकारण पनि अव सबै स्थानीय तहहरुले यसबारे बिशेष कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । लुम्बिनीबाट पोखरा जाने र पोखराबाट लुम्बिनी फर्कने पर्यटक मात्रै नभएर पाल्पा नै घुम्न भनेरै धेरै पर्यटक यहाँ आउ“छन् यसकारण पनि अन्यत्रका पर्यटक तानसेन ल्याउने र तानसेन आएका पर्यटकहरुलाई अन्य छिमेकी स्थानीय तहहरुसम्म पु¥याउने गरि योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक तयारी आजैबाट सुरु गरौं । पाल्पाको पर्यटन प्रवर्धन पनि गरौं । पर्यटन वर्ष पनि सफल पारौं ।
पाल्पा समाचारपत्र बर्ष ९ अंक २२ को सम्पादकीय केही सम्पादन सहित फिचर स्तम्भमा प्रकाशन गरिएको ।
तस्बिरः साभार गुगल
भुसलडाँडा माविमा एनसिसिका बिद्यार्थीको तालिम निरीक्षण तथा शुभकामना प्रदान